Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Xiritaanka xannuunka badan ee Thailand waa inuu joogsadaa, ganacsiyadu way ooyaan
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
PM wuxuu ka hadlayaa qufulka Thailand
Xarunta Thailand ee Maamulka Xaalada COVID-19 ayaa fududaysay qaar ka mid ah xakamaynta cudurada Arbacadii, Sebtember 1, 2021, ee qufulka Thailand.
Waqtigan xaadirka ah qufullada Thailand waxaa ka mid ah 9 -ka fiidnimo ilaa 4 -ta aroornimo ee gobolladeeda “cas cas”.
Ganacsatada Thai waxay dalbanayaan in qufulka isla markiiba la joojiyo oo qaybinta tallaalka si waxtar leh loo qabto.
Ganacsatadu waxay xirnaayeen xirnaashaha muddo bil ka badan waxayna hirgeliyeen tallaabooyin adag oo lagu xakameynayo cudurrada si looga fogaado xirnaanshaha mustaqbalka.
Raiisel wasaaraha Thailand Prayut Chan-o-cha ayaa sheegay in 9:00 fiidnimo ilaa 4:00 subaxnimo bandow ah 29 COVID-19 Gobollada "casaan madow", oo ay ku jiraan Magaalada Pattaya iyo Bangkok, waa la soo gaabin karaa ama kor loo qaadi karaa, iyadoo ku xiran xaaladda COVID-19.
Wuxuu yiri in kasta oo Xarunta Maamulka Xaalada COVID-19 ay fududeysay qaar ka mid ah xakameynta cudurada Arbacadii, wuxuu rajeynayaa in qof walba uu ilaalin doono. Xayiraadaha ayaa laga yaabaa in la sii dabciyo haddii xaaladdu hagaagto.
Gen. Prayut ayaa sheegay in soo gaabinta ama qaadista bandowga ay ku xirnaan doonto tirada caabuqyada, dilalka, iyo cabbirrada kale ee la xiriira masiibada.
Raiisel wasaaruhu wuxuu sheegay inuu ogaa in bandowgu uu saameynayo xarumaha madadaalada, iyo ururada matalaya milkiilayaasha baararka, baararka, iyo meelaha kale ee habeenkii ay rabaan inay CCSA kala hadlaan qaadista xayiraado badan, laakiin wuxuu weli ka walaacsan yahay dadka ku soo qulqulaya goobahan.
Ganacsiyada Thai waxay dalbanayaan in qufulka la joojiyo isla markiiba
Ganacsiyo badan ayaa rajo wanaagsan ka qabay ka dib maalintii ugu horreysay ee dib loo furay Arbacadii, ka dib markii in ka badan bil la xiray tallaabooyin xiritaan oo meesha yaal. Ganacsiyo badan ayaa fulinaya tillaabooyin xakameyn cudur oo adag si looga fogaado xiritaan kale oo mustaqbalka ah, halka guddi isku dhaf ah ay dowladda ka codsadeen inaysan ku dhawaaqin xannibaadyo dambe.
Guddiga Wadajirka ah ee Joogtada ah ee Ganacsiga, Warshadaha iyo Bangiyada (JSCCIB) ayaa ka codsaday dowladda inaysan mar kale hirgelin tallaabooyinka xiritaanka sida jawaabta COVID-19, laakiin taa beddelkeeda in xoogga la saaro qaybinta waxtarka leh ee tallaallada iyo isgaarsiinta hufan ee dadweynaha guud.
Guddoomiyaha JSCCIB, Payong Srivanich, ayaa sheegay in tallaabooyinka xiritaanka ee la hirgaliyay in ka badan hal bil aysan u horseedin hoos u dhac weyn tirada cusub ee COVID-19 cdameero, laakiin taa beddelkeeda waxay u geysatay burbur joogto ah dhaqaalaha.
Sidoo kale, Madaxweynaha Xiriirka Warshadaha Thai (FTI), Suphan Mongkolsuthee, ayaa sheegay in dowladdu aysan ahayn inay dib u soo celiso tallaabooyinka xiridda, isagoo ku andacoonaya in xaddiga daboolista tallaalka ay hadda gaarto 70% dadweynaha, haddii ay dowladdu awood u leedahay inay gaarto soo -bixitaankeeda. bartilmaameed.
Suuqyo badan oo laga dukaamaysto oo cidla ahaa intii lagu jiray xidhitaanka, ayaa dib u soo noolaaday shalay, maadaama dukaamo iyo makhaayado badan hadda loo oggol yahay inay dib u furmaan.
Xarunta MBK ee Bangkok, tafaariiqleyaal badan ayaa dib u furay dukaammadoodii iyadoo la fuliyay tallaabooyin adag oo caafimaad iyo badbaado. Maxkamadda raashinka ee halkaas ayaa hadda si buuxda loogu diyaariyey adeeg iyadoo inta badan shaqaalaha hadda si buuxda loo tallaalay. Xarunta MBK, oo sidoo kale loo yaqaan Mahboonkrong, waa suuq weyn oo ka kooban 9 dabaq oo ku yaal Bangkok oo leh ku dhawaad ​​2,000 dukaan, maqaayado, iyo adeegyo.